iTunes Library n'efu efu? Idozi ya! e
> Resource> iTunes> Olee idozi ya mgbe iTunes Library okụrede
"My iTunes Library arahụ. M kpam kpam furu efu. M na a na-eji iTunes di na nwunye nke Apple ngwaọrụ ruo ogologo oge, ọ dịghị mgbe zutere ụdị ọnọdụ. Mgbe m malitere kọmputa m n'abalị ikpeazụ, achọta na iTunes Library ọdịnaya na-arahụ. Ma, m na iPhone na iPad yiri arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Gịnị na-aga? Biko, nyere. "
A enyi m gwara m na ya na iTunes Library na-efu. M na-achọgharị na Google, ịchọta na ọtụtụ ndị nwere okosobode otu ọnọdụ na nso nso. Ụfọdụ furu efu iTunes n'ọbá akwụkwọ mgbe ha kwalite ha iOS ngwaọrụ. Ụfọdụ furu efu ya n'ihi na ha na-emelite iTunes onwe ya. Ọ bụrụ na ị na ọnọdụ, na-gị Chiefs on. Ruo n'ókè ụfọdụ, ị pụrụ isi mee ka efu iTunes Library azụ. N'okpuru ebe a bụ 2 mfe ụzọ na-iTunes Library azụ.
Ngwọta 1. Get efu iTunes Library azụ Wondershare TunesGo
Ngwọta 2. Get efu iTunes Library azụ site dochie ya faịlụ na otu agadi otu
Ngwọta 1. efu iTunes Library azụ Wondershare TunesGo
Ọ bụrụ na ị na kwukwara ọtụtụ nke tracks gị iTunes Library ebe ikpeazụ update na synced gị iTunes Library gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod na ndị a na egwu, kama iji ngwọta 2, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo na-efu efu iTunes Library azụ . Ihe kpatara ya bụ na ochie iTunes Library faịlụ anaghị nwere ndị ọhụrụ music, vidiyo ma ọ bụ ngwa na ị na atụkwasịkwara iTunes. Wondershare TunesGo-ahapụ gị nyefee music, listi ọkpụkpọ, videos, wdg si iOS ngwaọrụ iTunes Library, na-eme na-efu iTunes Library a zuru ezu otu. Naanị na 3 mfe nzọụkwụ, ị nwere ike idozi nsogbu nke iTunes Library okụrede.
Nzọụkwụ 1. Wụnye TunesGo na kọmputa gị na jikọọ gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPad, iPod) na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. TunesGo ga chọpụta gị iOS ngwaọrụ na-egosipụta ya na isi window. Na mgbe ahụ ị nwere ike pịa Nyefee Music na-ahọrọ "Mbupụ na iTunes" si "Export" button mbupụ ha si iOS ka iTunes Library karị.
Nzọụkwụ 3. Dị ka zụrụ ihe, ị kwesịrị ị na ẹkedori iTunes, pịa Dezie> Mmasị. Pịa taabụ maka Echekwala na ego nhọrọ "Download tupu iwu mgbe dị".
Cheta na: TunesGo (Windows) na-akwado exporting music na vidiyo ozugbo na iTunes Library. TunesGo (Mac) ugbu a nanị-enye gị ohere mbupụ music ka iTunes Library. Dị ka vidiyo, ị kwesịrị ị na-eji nke a ngwa mbupụ Mac mbụ na mgbe e mesịrị mbubata ha ka ha iTunes Library on Mac.
Ọ bụrụ na gị iTunes Library okụrede nri mgbe ị na-emelite ya, ị ga-agbalị na usoro a.
Nzọụkwụ 1. nnọọ iTunes. Chọta na ịdọrọ iTunes Library faịlụ site iTunes Library nchekwa desktọọpụ
iTunes Library.itl-emi odude ke:
Windows 8, Windows 7, na Windows Vista: / User / aha njirimara / Music / iTunes /
Windows XP: / Documents na Mwube / aha njirimara / My Documents / My Music / iTunes /
Nzọụkwụ 2. Ke "Previous iTunes Libraries" nchekwa na iTunes nchekwa, ịdọrọ ọhụrụ iTunes faịlụ nke aha dị ka iTunes Library yyyy-MM-DD.itl. Ihichapụ ụbọchị na faịlụ a. Detuo ya ndị nchekwa na nzọụkwụ 2 ebe ị na-ahụ iTunes Library.itl.
Mgbe dochie gbajiri agbaji iTunes Library.itl faịlụ na okenye otu, ị pụrụ ịhụ gị na-efu iTunes Library bụ azụ.